Inona No Nitranga Tao Maekelawi? Fitantarana Momba Ny Fampijaliana Tao Amin’ny Foiben’ny Fonja Etiopiana Izay Fantatra Fa Ho Akatona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2018 6:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, Français, Italiano, English
Ireo mpikambana ao amin'ny Zone9 ao Addis Abeba, taona 2012. Avy aty ankavia miankavanana: Natnael, Abel, Befeqadu, Mahlet, Zelalem ary Atnaf. Sary natolotr'i Endalk Chala.
Tamin'ity herinandro ity, nanambara ny Praiminisitra Etiopiana Hailemariam Desalegn fa hikatona tsy ho ela i Maekelawi, iray amin'ireo foibe famonjana malaza indrindra ao amin'ny firenena.
Nahatonga fihetseham-po samihafa ho an'ireo Ethiopiana maro izay niaina ny fomba famotopotorana an-kerisetra malaza ratsy natao tao Maekelawi izany. Anisan'izany ilay mpanoratra ato amin'ny Global Voices sady bilaogera momba ny zon'olombelona Befeqadu Hailu.
Tamin'ny taona 2014, nosamborina i Befeqadu niaraka tamin'ireo bilaogera sady mpanao gazety miisa valo niara-niasa taminy, noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny bilaogy iombonana fantatra amin'ny anarana hoe Zone9, izay nanoratan'izy ireo ny adidin'ny governemanta momba ny zon'olombelona sy ny lalàm-panorenana.
Nosamborina ary notazonina tao Maekelawi tsy misy fiampangana nandritra ny roa ambinifolo herinandro teo ho eo tamin'ny taona 2014 ireo mpanoratra miisa sivy, talohan'ny nanamelohana azy ireo tamin'ny Fanambarana Momba ny Ady Manohitra Ny Fampihorohoroana tao amin'ny firenena.
Nanoratra tantara fijoroana vavolombelona momba ny zavatra niainany tao amin'ny foiben'ny famonjana i Befeqadu, izay zaraintsika eto mba hanampiana hanazavana ny zava-misy henjana ao Maekelawi nandritra ny fitondran'ny governemanta ao Ethiopia amin'izao fotoana izao.
Tao anatin'ny taratasy tamin'ny volana Aogositra 2014 ho an'ny Global Voices avy amin'ny mpisolovavan'ireo bilaogera, nanoratra i Befeqadu hoe:
Mampihorikoditra ny hanitsaka ao amin'ny fonjabe malaza ratsy ao Maekelawi ho an'ireo rehetra izay mahafantatra ny tantarany. Fa ny fanentanako lalina sy ny fitokisako fa ny herisetra sy ny habibiana atao amin'ireo olona dia fahatsiarovana efa lasa ary namonjy ahy tamin'ny fangovitana rehefa nentina ho any amin'ilay toerana aho. Heveriko fa nahatsapa toy izany koa ireo namako. Ankoatra izay, tsy misy zavatra tokony hatahoranay, satria sady tsy mpitsikilo izahay no tsy mpikambana ao amin'ny tafika mitam-piadiana. Fa mpanoratra fotsiny ihany.
Saingy vantany vao tonga tao Maekelawi aho, nilaza tamiko ireo gadra [hafa] fa tao amin'ny iray amin'ireo efitra famonjana malaza ratsy tao amin'ny fonja no nametrahana ahy, fantatra amin'ny hoe “Siberia”. Tao anatin'ny herinandro latsaka, nahatsapa toy ny niaina tao anatin'ny tantara iray avy amin'ny tatitra momba ny Fanaraha-mason'ny Zon'Olombelona tamin'ny taona 2013 mitondra ny lohateny hoe “Mitady Fiaiken-keloka Izy Ireo” aho.
Ny dosie “Mitady Fiaiken-keloka Izy Ireo” dia mitatitra ny fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona, ​​ny paikady fakàna am-bavany tsy mifanaraka amin'ny lalàna, ary ny fepetra henjana amin'ny famonjana ao amin'ny fonjaben'i Maekelawi ao Addis Ababa, izay nalaina avy amin'ny antsafa natao tamin'ireo voafonjan'i Maekelawi teo aloha sy ny fianakaviany. Ahitana mpanao politika mpanohitra, mpanao gazety, mpikarakara fihetsiketsehana, ary ireo izay lazaina fa mpanohana ny fiokoana ara-poko ireo voafonja ao Maekelawi .
Namaritra ny fomba famotopotorana tao Maekelawi ho “mirona bebe kokoa amin'ny fanjakazakana sy ny tsindrihazolena noho ny fahatokisana na ny fahaiza-mamoronana” i Befeqadu .
“Raha tsy vitan'izy ireo ny maka vaovao avy aminao amin'ny fomba toy izany, dia manery hisian'ny fiaiken-keloka amin'ny alàlan'ny kapoka, ny daroka, ny fampiharana ny fandreraham-batana sy ny vely karavasy izy ireo”, hoy izy nanoratra.” Niresaka tamin'ireo voafonja sasany aho izay efa nandalo dingana mbola ratsy kokoa noho izany toy ny fanitsakitsahana miharihary ny fiainan'izy ireo manokana. Noterena hiboridana ary natao nijajirika na nasaina nipetraka mandrapahamarainan'ny andro ny gadra sasany. “
Nanohy nanazava izy fa voatery niaiky izy sy ny mpiara-miasa taminy:
Tao anatin'ity raharahanay ity, niaiky heloka izahay ny farany. Niaiky izahay noho ny fahamafisan'ny fanerena. Tsy zakanay ny fanerena an-kerisetra mitohy sy nandrera-tsaina anay. Tsy vitanay intsony ny niaina ny helon'ny Maeklawi. Nilaza tamin'ireo mpanao famotorana izay tian'izy ireo ho re izahay ny farany. Nilaza teny manameloka anay araka izay tratra izahay ho fanomezana fahafaham-po azy ireo. Saingy tsy nahafaly azy ireo velively ny teny toy ny hoe “eny, nandrisika herisetra izahay”. Naverin'izy ireo nosoratana noho izany ny fiaikenay heloka mba hifanaraka amin'izay mety amin'izy ireo. Niezaka nanazava ny sasany taminay. Voatery niaritra fampijaliana ny hafa. Saingy farany, nilefitra tamin'ny fanerena ihany izahay ary nanao sonia ny pejy fitanisan-keloka izay efa tsara lahatra, afa-tsy ilay mpiara-miasa aminay Abel, izay tsy nety nanao sonia tamin'izay fotoana izay. Mbola velona ihany izy na dia teo aza ny fampijaliana izay niaretany hatramin'izay, ary ny fiaiken-keloka, rehefa noesorina ny farany, dia tena tsy marina mihitsy, mba tsy ilazana hoe tsy misy idiranay.
Fantatsika ankehitriny fa anisan'ny lanonana ao Maekelawi ny fampijaliana izay manambara ny “marina'” amin'ny heloka vita. Efa ela aho no nihevitra fa sarotra ny famotorana ataon'ny polisy izay ahitana fahaiza-manao sarotra, fahalalana sy tetika ara-tsaina mba hamantarana ny zava-misy. Fantatro ankehitriny fa tsy sarotra ny famotopotorana ataon'ny polisy ao Maekelawi. Tsotra izany raha ny marina. Toy ny milina mampiaiky heloka ny gadra izy ireo.
Ao Maekelawi, ny fitsipika entin'ny polisy hanaovana famotorana dia ny hoe meloka ianao raha tsy hoe voaporofo ny mifanohitra amin'izany. Tsy misy mihaino ny fangatahanao ho tsy meloka na ny fanazavanao .
Nigadra nandritra ny 18 volana tany amin'ny fonja Ethiopiana niaraka tamin'ny mpiara-miasa taminy i Beefqadu talohan'ny nahafahany tamin'ny volana Oktobra 2015. Noafahana madiodio tsy nisy fitsarana izy sy ireo mpiara-miasa taminy.
Faly ny mpikambana ao amin'ny Zone9 tamin'ny famoahana an'i Befeqadu Hailu (faharoa avy any ankavia, manao folara) tamin'ny volana Oktobra 2015. Sary nozarain'i Zelalem Kiberet tao amin'ny Twitter.
Nilaza ny tantara henony tamin'ireo gadra namany ihany koa i Befeqadu, izay nentina tany Maekelawi taorian'ny fijaliana mbola mafy kokoa noho izany tany amin'ireo foibe famonjana hafa tao amin'ny firenena. ” Nijaly noho ny fampijaliana diabôlika toy ny fanesorana ny hohon'ny rantsan-tànany, ny vely karavasy, ary ny fanaronana ny loha ireo gadra ireo,” hoy ny nosoratany.
Voamarina tamin'ny alalan'ny famotorana bebe kokoa tany amin'ny foibe famonjana alohan'ny fitsarana ny vaovao azo avy amin'ireo voafonja tao amin'ny foibe famonjana tsy nolazaina anarana. Tsy nahalala mihitsy ny toerana izay nitondrana azy ireo ny gadra tamin'ity famotopotorana feno herisetra ity satria nosaronan-tava izy ireo. Toy ny lavaka mainty ilay fanagadrana tsy fantatra anarana .
Raha niresaka momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona teo ambany fitondran'i Derg, izay tadiavin'ny governemanta ao Ethiopia amin'izao fotoana izao hialana dia nampitaha ireo zavatra niainany ireo tamin'ny lasa i Befeqadu,.
“Hitantsika fa tsy lavitra araka izay eritreretintsika akory ny fangirifirian'ireo Ethiopiana voafonja,” hoy izy.
Nanoratra tao amin'ny Twitter i Befeqadu amin'ny famaliana ity vaovao ity :
Nilaza ny PM Hailemariam fa “trano fampijaliana nandritra ny fitondrana Derg i Maekelawi “; Mahakivy izany. Izaho no vavolombelona velona tao amin'io efitra fampijaliana io teo ambany fitondrany. Tamin'izany fotoana izany, naleoko namono tena toy izay hahita ireo mpanao famotorana ny ampitso. Sarotra ny mamela ny fahadisoana nataon'ireo olona ireo.
Tsy mbola nahazo fahafahana tanteraka raha ny marina i Befeqadu sy ny roa tamin'ireo mpiara-miasa taminy Atnaf sy Natnael . Na dia novaina aza ny fiampangana tamin'ny fampihorohoroana nanamelohana azy ireo dia mbola miandry ny fanapahan-kevitra momba ny fiampangana hafa izy ireo, noho ny fanakianana am-pilaminana ny governemanta amin'izao fotoana izao no nahatonga izany rehetra izany .
Vakio ireo lahatsoratra hafa:
Ny tatitra feno nataon'i Befeqadu momba ny zavatra niainany tao Maekelawi
Ny fanangonam-baovao feno nataon'ny Global Voices momba ny raharaha bilaogera Zone9